२१ गते बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि निर्वाचन सामग्रीसहित कर्मचारी सर्लाहीका मतदानस्थल र केन्द्र तर्फ हिँडे !! – Dhukdhuki fm
२१ गते बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि निर्वाचन सामग्रीसहित कर्मचारी सर्लाहीका मतदानस्थल र केन्द्र तर्फ हिँडे !!
सर्लाही, मंसिर १७ – यहि मंसिर २१ गते बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि निर्वाचन सामग्रीसहित कर्मचारी सर्लाहीका मतदानस्थल र केन्द्र तर्फ हिँडेका छन् ।
चुनावका लागि आवश्यक पर्ने मतपेटिका, मतपत्र, स्वस्तिक छापलगायतका सामग्रीहरु लिएर कर्मचारीहरु मतदान केन्द्र तिर लागेका सर्लाहीका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकारी भुजेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार चुनावमा खटिएका कर्मचारीले मतदाता परिचयपत्र समेत लगेर गएका छन् । निर्वाचनको लागि सर्लाहीमा ११८ मतदान स्थल र ५१५ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । तोकिएका मतदान केन्द्र मध्ये १४१ मतदान केन्द्र अति संवेदनशील, १५१ संवेदनशील र २६ मतदान केन्द्र सामान्य रहेको सर्लाहीका प्रहरी प्रवत्ता डिएसपी राजेशबाबु थापाले जानकारी दिनुभयो ।
मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि प्रत्यक मतदान केन्द्रमा ३ जना नेपाल प्रहरी र ४ म्यादी प्रहरी खटाउने तयारी भएको डिएसपी थापाले जानकारी दिनुभयो। चुनावी सुरक्षाका लागि सर्लाहीमा १ हजार ७७४ नेपाल प्रहरी र ३ हजार ११३ म्यादी प्रहरी परिचालित हुने भएका छन ।
४ प्रतिनिधी सभा सदस्य र ८ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन हुने क्षेत्र रहेको सर्लाहीमा ३ सय १८ मतदान स्थलमा ५ सय १६ मतदान केन्द्र रहेका छन् । जिल्लामा ३ लाख ८५ हजार ५ सय ८१ मतदाता रहेका छन् ।